"Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy, na maty antoka izy?" Lioka 9:25
Raha mbola tsy nisy nahazo ny “kitapom-bola” amin’ny lalao filokana iray, dia mitombo hatrany ny vola, ary mihamaro ny mpiloka mitsapatsapa. Koa mihena ny vintana mety hahazoan’ny tsirairay, nefa dia samy manonofinofy ny hahazo ilay loka goavana ny rehetra.
Manontany antsika ny Baiboly: Inona no soa azon’ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy… mahazo ny harena rehetra eto an-tany? Kanefa rehefa ho faty, na manankarena na mahantra, dia tsy hitondra entana na inona na inona, afa-tsy ny fahotana ihany angamba, izay trosa goavana eo anatrehan’Ilay Andriamanitra masina hihaona amin’ny tsirairay.
Soa ihany fa azo atao ny miala amin’izany trosa izany! Asehon’ny Baiboly antsika hoe Iza no tokony hohatonina, hahitana ny sandan’izany avotra izany. Ny sandany dia ny ra sarobidin’i Kristy, latsaka teo amin’ny hazofijaliana. Ny sandany dia ny ainy, natolony ho avotra ho an’izay te ho voavela heloka. Tsy misy na inona na inona aloa, fa samy afaka mandray izany famonjena maimaimpoana izany avokoa, famonjena azo antoka. Jesosy Kristy mihitsy no manome toky hoe: “Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy” (Jaona 6:37). Ny fanolorany ny ainy ho antsika dia tokony horaisina toy ny fanomezana lavorary, tsy misy takalony. “Tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no nanavotana anareo … fa ny ra soan’i Kristy” (1 Petera 1:18-19). Tokana ihany ny fepetra takiana, dia izao: miaiky ny trosantsika, manaiky fa tsy mahaloa izany, ary mino fa efa nefain’i Kristy manontolo io trosa io. Saingy tsy maintsy atao izao ankehitriny izao izany. Sao dia tara loatra rahampitso.